Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya oo ay wehliyaan Injineero dhinaca dhismaha ah aya soo kormeeray dhismaha Hotel Curuba (Daawo) | SNTV
Posted July 16, 2015 by Abdikarim in News
Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe dib loogu dayactirayo Hotelka curubo oo ka mid ah dhismiyaasha caanka ahaa ee ku burburey dagaaladii ka dhacay dalka xilli maalintii shalay uu kormeerey Wasiirka Warfaafinta oo ay wehliyaan injineero qiimeyn ku sameynaya.
Wasiirka Warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye” oo kormeeray hotelka Curuba ayaa tilmaamay in dib u dayactir lagu sameyn doono Hotelka Curuba, halkaasi oo ka mid ah meelaha muhiimka u ah bulshada.
Wasiirka oo ay wehliyaan injineero ayaa ku soo wareegay qeybaha uu ka koobanyahay hotelka, kaasi oo u jeedkiisu yahay sidii injineerada ay u qiimeyn lahaayeen suurta galnimada dib u dhis lagu sameeyo hotelka.
“Hotelka Curuba dowladda waxa ay dooneysaa in dib u dayactir lagu sameeyo, si loogu qabto shirarka muhiimka ah, laguna soo dhaweeyo dalxiisayaasha, waxaana sidoo kale la sameynayaa meel ay ku soo xirtaan doonyaha dalxiiska, runtii Hotelkan waxa uu marti gelin doonaa madaxda caalamka ee soo booqata dalka, hotelkan ahmiyad weyn ayuu ugu fadhiyaa dowladda Soomaaliya” ayuu yiri Wasiir Maareeye.
halkan ka Daawo Wareysiga Kormeerka Wasiirka.